Madaxweyne Afwerki oo balan-qaad u sameeyey Madaxda dowlada Itoobiya | Caroog News
Madaxweyne Afwerki oo balan-qaad u sameeyey Madaxda dowlada Itoobiya
December 27, 2019 - Written by admin
Afwerki ayaa arbacadii Addis-Ababa ku tagay booqashadii ugu horreysay tan iyo markii ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu abaal-marinta nabadda ee Nobel Peace Prize ku helay billaabidda heshiiska labada dal, isagoo ka mahad celiyey soo dhoweynta wanaagsan ee la siiyey isaga iyo wafdigiisa.
Waxa uu ballan-qaaday inuu u shaqeyn doono “si xooggan si dib loogu helo fursadihii ka lumay saddex jiil oo labada dal ah, loona xoojiyo bogga cusub ee wada-shaqeynta labada dal” sida uu qoraal uu twitter-ka soo dhigay ku sheegay wasiirka warfaafinta Eritrea Yemane Meskel.
Isaias iyo Abiy ayaa sidoo kale khamiistii dhagax dhigay dhismaha cusub ee safaaradda Eritrea ee Addis-Ababa.
Kadib markii labada hoggaamiye ay markii ugu horeysay ku kulmeen Asmara sanadii tagtay, ayaa waxay dib u fureen safaaradahooda, duulimaadyadii labada dal ayaa dib loo billaabay, waxaana xigay kulamo kale oo dhowr ah.
Eritrea iyo Itoobiya ayaa waxaa dhex-maray dagaal xuduudda ka dhacay, 1998-2000, kaasi oo ay ku geeriyoodeen qiyaastii 80,000 oo qof.